पोर्चुगलका नेपाली सोध्छन्- ‘दूतावास स्थापना गर्न सरकार किन उदासीन ?’ « News24 : Premium News Channel
प्रकाशित मिति : Feb 08, 2020
लिस्वन, २५ माघ । युरोपियन मुलुक पाेर्चुगलमा पनि अहिले नेपालीहरूकाे संख्या बढ्दाे छ । तर यहाँ हालसम्म नेपालकाे राजदूतावास स्थापना हुन सकेकाे छैन । र, साे स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भरिएका छन् । प्रवासी नेपाली मात्र होइन नेपालभित्रै पनि पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहस हुन थालेको छ । तर, यो आवाज नयाँ भने होइन । विगत केही वर्षयता दूतावास स्थापनाका लागि पोर्चुगलमा बस्दै आएका नेपाली समुदाय, राजनीतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय संघ–संगठन गैह्रआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगल लगायतले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारसमक्ष ज्ञापन–पत्र समेत बुझाउँदै आएका छन् ।
अहिले पोर्चुगलमा अनुमानित ३० हजार नेपाली बसोबास गर्छन् । तर नेपाल सरकारले अवैतनिक वाणिज्य दूतमार्फत काम गराइरहेको छ । विभिन्न समयमा एनआरएनए पोर्चुगलले आफ्नै पालामा दूतावास ल्याउने भन्दै आए पनि आजसम्म न दूतावास स्थापना भयो न कुनै पहलकदमी नै । नेपाली समुदायका अगुवाहरू पनि सरकार खासै गम्भीर नबनेको गुनासो गर्छन् ।
आफ्ना नागरिक भएका मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने सरकारको दायित्व हो । तर नेपाल सरकार पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने कि नेपालमा पोर्चुगिज दूतावास स्थापना गर्ने भन्ने दोधारमा छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन थालेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले पोर्चुगलमा बस्ने नेपालीको एमआरपी अर्थात ‘यन्त्रवाचक राहदानी’ बनाउने काम फ्रान्सस्थित दूतावासले गर्दै आएको छ भने अन्य सबैजसो काम अवैतनिक दूतमार्फत हुँदै आएको छ । पोर्चुगलस्थित अवैतनिक बाणिज्य दूत मकर हमाल पनि दूतावास स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मैले दूतावास स्थापनाको लागि नेपाल सरकारसँग पटक पटक ताकेता गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारको सही निर्णयलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सरकार : पर्ख र हेरको अवस्थामा
पोर्चुगलमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको नेपाली समुदायको चापले दूतावास स्थापना हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । विगतदेखि नै उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि संघर्ष समिति नै बनाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर यसप्रति नेपाल सरकार निर्णय गर्नभन्दा पनि ‘पर्ख’ र ‘हेर’ को अवस्थामा छ ।
पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या बढ्दै गएकोप्रति सरकार र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयं जानकार छन् । तर सरकार नेपाली समुदायको फाइदाभन्दा पनि पोर्चुगलसँग नेपालको व्यापार, पर्यटकको आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक नभएको भन्दै पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार दूतावास स्थापना गर्दा ठूलो धनराशी खर्च हुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार बढ्ने देखेर सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
चिनी र वाइन साटासाट
केही वर्षदेखि पोर्चुगलको श्रम बजारमा नेपाली श्रम र सीपले स्थान पाएको छ । यहाँको कृषि र होटल क्षेत्रमा अधिकांश नेपाली काम गर्छन् । यसका साथै नेपाली समुदायले पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौंस्थित भन्सार विभाग तथा पर्यटन बोर्डको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल र पोर्चुगलबीचको व्यापार एवं पर्यटक आगमनको दर निराशाजनक छ । १० वर्षअघि पोर्चुगलले नेपालबाट चिनी आयात गरेर नेपालमा वाइन पठाउने गरेको तथ्यांक पनि छ । अहिले पनि नेपालमा थोरै मात्रामा पोर्चुगलको वाइन पुग्ने गरेको छ । दुुई देशबीचको व्यापार पर्यटन र श्रम बजारलाई बढावा दिनका लागि पनि दूतावास स्थापनाको विकल्प नभएको नेपाली जनसम्पर्क समिति पोर्चुगलका अध्यक्ष विनोद घिमिरे बताउँछन् ।
अहिले एक वर्षमा मुश्किलले १ हजार पोर्चुगिज नागरिकले नेपाल भ्रमण गर्ने गर्दछन् । जुन स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्सको भन्दा निकै कम हो । यस्तै पोर्चुगलले नेपालबाट वार्षिक ४ लाख डलर बराबरको सामान आयात गर्छ भने १ मिलियन डलर बराबरको सामान नेपाल निर्यात गरेको तथ्यांक छ । यसैले पनि नेपाल सरकार पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
दूतावास स्थापना : लागत कति ?
पोर्चुगलमा दूतावास स्थापनाका लागि सुरुमा ८ देखि १० करोड नेपाली रुपैंयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, दूतावास सञ्चालनमा आएपछि मासिक २० देखि ३० हजार युरो खर्च हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जबकि अहिले पोर्चुगलस्थित अवैतनिक वाणिज्य दूतावासको मासिक खर्च ६ देखि ७ हजार वरिपरि छ । यसैले पनि सरकारले विना लगानी सेवा दिएको भन्दै दूतावास स्थापनामा चासो नदेखाएको बुझिन्छ ।
‘लामो समयसम्म नेपालीहरू पोर्चुगलमा नबस्ने र पासपोर्ट आएपछि अन्य मुलुकमा स्थानान्तरण हुने भएकोले सरकारले दूतावास स्थापना नगरेको हो,’ एक अभियन्ता भन्छन्, ‘सरकारले दूरगामी योजनाका साथ दूतावास सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने देखेर सरकारले दूतावास स्थापनामा चासो नदिएको अभियन्ता एवं पर्यटन दूत रमेश गुरुङको तर्क छ । ‘यसअघि पोर्चुगल र स्पेनमा दूतावासका लागि नेपाल सरकारलाई एकैपटक जानकारी गराए पनि सरकारले पोर्चुगललाई बाइपास गरेर स्पेनमा दूतावास स्थापना ग¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले नेपालीको संख्यालाई भन्दा पनि पर्यटक आगमन र व्यापारलाई ध्यान दिँदा हामी प्राथमिकतामा नपरेका हौं ।’
क–कसले बुझे त ज्ञापन–पत्र ?
दूतावास स्थापनाका लागि पोर्चुगलका नेपाली समुदयाले हरेक वर्षजस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि परारष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पालैपालो ज्ञापन–पत्र थमाएका छन् ।
दूतावासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू सुुजाता कोइराला, कृष्णबहादुर महरा, प्रकाशशरण महत र बहालवाला मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसम्मले ज्ञापन पत्र बुझिसकेका छन् । दूतावास स्थापनाका अभियन्ता एवं एनआरएनए पोर्चुगलका पूर्व उपाध्यक्ष शम्भु गौतम पनि पोर्चुगलबासी नेपाली समुदायलाई राज्यले साथ र सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।
पेरिस दूतावासको आँखा पोर्चुगलसम्म
सन् १९६७ मा नेपाल सरकारले फ्रान्सस्थित पेरिसमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो । यसैको कारण पनि फ्रान्सबाट नेपाल घुम्न जाने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ ।
अहिले नेपाल सरकारले पेरिसमा स्थापना गरेको दूतावासले पोर्चुगल लगायतका देशमा बस्ने नेपालीको समस्या हल गर्दै आएको छ । पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले दूतावास नै अर्को मुलुकमा भएका कारण सहज र सरल रुपमा सेवा लिन नपाएको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका संयोजक गोविन्द पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार राहदानी, मन्जुरीनामा तथा पोर्चुगल सरकारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि सरकारले पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
पेरिसस्थित राजदूतावासले धेरै मुलुकलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले पोर्चुगलका नेपाली समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सो दूतावासमा जनवरी १० तारिखसम्म पोर्चुगलका १ सय ११ जना नेपालीको नयाँ राहदानी आएको छ । जुन अन्य मुलुकको भन्दा धेरै हो ।
ज्ञापन पत्रलाई ‘वार्षिक श्राद्ध’ को संज्ञा
विगत ९ वर्षको अवधिमा एनआरएनए पोर्चुगलले पटक–पटक नेपाल सरकारलाई दूतावासका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको संस्थाका पूर्व उपाध्यक्ष गौतम बताउँछन् । केही दिनयता दूतावास स्थापनाको विषयले सामाजिक सञ्जाल तातेपछि एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष तिलक गैरेले पनि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेर फेरि ज्ञापन–पत्र बुझाउन भ्याएका छन् ।
तर कार्यसमितिमा छलफल नै नगरी आफूखुसी ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्दै अध्यक्ष गैरेमाथि आफ्नै कार्यसमितिका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् । ‘जुन अध्यक्ष आउँछन्, उसले नेपाल गएर दूतावास चाहियो भनेर ज्ञापन–पत्र बुझाउने चलन नै बसेको छ,’ कार्यसमिति सदस्य दीपक खत्रीले भने, ‘यो वार्षिक श्राद्धजस्तै हो । विषय गम्भीर भए पनि कार्यसमितिमा छलफल नै नगरी आफूखुशी ज्ञापन पत्र बुझाउनु गैरेको गैह्रजिम्मेवारी हो ।’
पोर्चुगलमा दूतावास स्थापनाका लागि सरकारलाई दबाव परिरहेको छ । अन्य देशको तुलनामा पोर्चुगलमा नेपालीको अस्थायी बसोबास बढी हुने भएकोले सरकारले चासो नदेखाएको परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
६ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले युरोपभित्र रहेका दूतावासको काम र आवश्यकताका बारेमा अध्ययनका गर्न विज्ञ टोलीसमेत गठन गरेका थिए । अहिले टोलीले काम गरिरहेको छ ।
पोर्चुगलको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पाँचवटा विकल्प अघि सारेको बुझिएको छ ।
– दूतावास स्थापना गर्ने
– वैतनिक महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने
– फ्रान्सस्थित दूतावासमा पोर्चुगलको लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने
– नेपालमा पोर्चुगिज दूतावास स्थापना गर्ने
– अहिलेकै अवैतनिक बाणिज्य दूतावासलाई स्तरीय बनाएर काम गराउने
यी विकल्पमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्मरण रहोस् यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पोर्चुगल आउँदा नेपाली समुदायकै आधारमा दूतावास राख्न नसकिने बताएका थिए । उनले एक हजार पर्यटक पनि पठाउन नसक्नु, दुई देशबीचको व्यापार शून्यजस्तै हुनु र नेपाललक्षित कुनै पनि कार्यक्रम नपर्नुले नै पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्न नसकिने उनको दावी थियो ।